Axmed Madoobe oo la kulmay Guddiyada Dastuurka (Sawirro) - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Axmed Madoobe oo la kulmay Guddiyada Dastuurka (Sawirro)
Axmed Madoobe oo la kulmay Guddiyada Dastuurka (Sawirro)
May 31, 2018 admin579
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa xalay casho sharaf u sameeyey Gudiga madaxa banaan ee Dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya iyo Gudiga la socodka dib u eegista Dastuurka ee labada Aqal ee Golaha Shacabka Soomaaliyeed oo safar shaqo ku jooga magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya.
Madaxweynaha ayaa labada gudi kula dar daarmey in la dardar galiyo dhameystirka Dastuurka, sidoo kalena laga feejignaado in Dastuurka la xado ama dano gaar ah lagu saleeyo dhameystirkiisa.
“Waxaan caawa aad ugu faraxsanahay inaan kulan idinla yeesho adinka oo ah Guddiga u xilsaaran arrimaha dib u eegista Dastuurka, waxaan adinka fileynaa inaad dardar gelisaan hawlaha Dastuurka, si horey loogu sii socdo.” Ayuu yiri Madaxweyne Axmed Madoobe.
Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee XFS, Gudigga La-socodka Dib-u-eegista Dastuurka ee Baarlamaanka iyo Gudigga Madaxabanaan ee Dib-u-eegista iyo Hirgelinta Dastuurka ayaa banbax-howleed soconaya maalmo kooban uga socdaa magaalada Nairobi.
Saddexda hay’ad oo yeelanaya kulamo wadajir ah ayaa ka arrin sanaya xoojinta wada shaqeynta iyo sidii loo dar-dargelin lahaa Ololaha Dib-u-eegista Dastuurka.
Wadooyinka qaar ee Muqdisho oo saaka xiran
Soomaaliya iyo Jabuuti oo kala saxiixday heshiisyo (Sawirro)
RW khayre oo magacaabay gudiga gurmadka Fatahaadaha
October 26, 2019 Duceysane
U.S.A:Duufaankta Harfi Oo Magaalooyin Cusub Khatar Ku Heysa
August 27, 2017 Cali Yare
Afhayeenka Dhaqanka Hawiye oo ka hadlay Tacdiyo Ciidanka Kenya ka geysteen gudaha Soomaaliya